အကင်ကြိုက်တဲ့ MyLann မိတ်ဆွေများအတွက် ရန်ကုန်မြို့ မှာ ရှိတဲ့ အကင်ဆိုင် ကောင်းကောင်းလေးတွေကို စုပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ 1390 views
အကင်ဆိုင်ကိုတော့ မိသားစုနဲ့ သွားစားချင်သူများ ၊ ဘော်ဒါတွေ နဲ့ စုစားချင်သူများ ၊ မွေးနေ့ ကျွေးချင်သူများ စသဖြင့် လာလာမေးတက်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဘယ်လိုဆိုင်လေးတွေ အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာ ဒီ List လေးကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်စားလို့ ရပါပြီ။ ဒီထဲမှာ ကိုယ်တိုင် ကင်စားလို့ ရတဲ့ အကင်ဆိုင် ၊ ကင်ပြီးသား မှာစားလို့ ရတဲ့ အကင်ဆိုင်တွေနဲ့ Hot Pot နဲ့ တွဲရောင်းတဲ့ အကင်ဆိုင် ဆိုပြီးခွဲပေးထားပါတယ်။
+++ ကိုယ်တိုင်ကင်စားလို့ ရတဲ့ အကင်ဆိုင်များ +++
ပုံမှန် (၁)ယောက် - 10900 Ks + Service +Tax
Promotion – ( Aug 1 - 31) - (၁) ယောက် - 7900 + Service + Tax
Branch (1) - No. 250, အရှေ့ မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း ၊ ဖုန်း - 09260523688
Branch (2) - No.4/B1, အင်းစိန်လမ်းမကြီး , လှိုင်မြို့ နယ် ၊ ဖုန်း- 095007997
Branch (3) - အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း , Parasian Café အနီး ၊ ဖုန်း - 09974340219
" Wa Tote Kyee"
ပုံမှန် (၁)ယောက် - 12800 Ks +Service
Promotion - Aug တစ်လလုံးမှာ (၃)ယောက်စားရင်တစ်ယောက် Free
အမှတ် - ၂၃၀ ၊ ဗားကရာလမ်းနှင့် ရတနာလမ်းထောင့် ၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်။ မြေနီကုန်း ဒဂုံစင်တာ ၁ အရှေ့၊ Ice Berry အပေါ်ထပ် မှာပါ။
ဖုန်းနံပါတ်က - ၀၉ ၇၃၁ ၅၇၇ ၆၁ ၊ ၀၉ ၇၉၅၉၂၁ ၇၀၂
“Rangoon Grill & Chilli”
(၁) ယောက် - 11800 Ks + Tax
Promotion - Beer (၁)လုံးသောက်၊ (၁)လုံးလက်ဆောင်။
Branch (1) - 182A, ရန်ကုန် -အင်းစိန်လမ်း,(သံလမ်းမှတ်တိုင် အနီး ), လှိုင်မြို့နယ် ၊ ဖုန်း - 01511502
Branch (2) - No. 2/25, လေးထောင့်ကန်လမ်း , သုမင်္ဂလာ အိမ်ရာ , Junction Zawanna အနီး , သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်။ ဖုန်း - 09 425309517
“ Mu Ka Hta Thai BBQ ”
(၁)ယောက် - 10800 Ks + Tax
Promotion - နေ့လည်(၁ )နာရီ မှ (၄)နာရီအတွင်း (၅)ယောက်စား၊ (၁)ယောက် Free ၊ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ
- No. 51, သစ္စာလမ်း , တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ် ။
(၁) ယောက် - 12800 Ks+ Tax
အချိန်အကန့်အသတ် - (၁)နာရီ (၄၅)မိနစ်။
- ကန်တော်ကြီး , ကရဝိတ် အနီး ၊ ဖုန်း 09 799 883896
" Man Pu Ku"
(၁) ယောက် - 12800 Ks + Service + Tax
No. 26/26E, အောင်ဇေယျလမ်း ,ကျောက်ကုန်း , ရန်ကင်းမြို့ နယ်၊
ဖုန်း - 09961555966/77
No. 30, စံကားဝါလမ်း , (တော်ဝင်စင်တာအနီး ) ဒဂုံမြို့ နယ်။
ဖုန်း - 01214284 ( Sub Menu နဲ့ ကြိုက်တာမှာစား )
No - L1 , ရွှေတောင်ကြားလမ်း ၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်။
ဖုန်း- 09 420000808
+++ BBQ နဲ့HOT POT +++
အမှတ် (၉၅/အက်ဖ်)၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ။
No. 95/F, ဝေဇယန္တာလမ်း , (၃)ရပ်ကွက် , တောင်ဥက္ကလာပ မြို့ နယ်။
ဖုန်း - 01 233 0381
"Hot Spot BBQ & Buffet"
(၁)ယောက် - 9800 Ks + Tax 5%
Promotion - လစဉ်လတိုင်း 30, 31, 1 ရက်နေ့တိုင်းမှာ(၃)ယောက်စား၊(၁)ယောက် Free ၊ အချိန်အကန့်သတ်မရှိ။
ရတနာလမ်း , ဝေဇယန္တာလမ်း အနီး , တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ် ။ ဖုန်း - 09252692764
"OSCAR HOT POT & BBQ"
BBQ တစ်အိုး - 8000Ks (2ယောက်စာ) လိုရင်ထပ်မှာ။
No. 15, စမ်းချောင်းလမ်း , စမ်းချောင်းမြို့ နယ်။ ဖုန်း - 09450919815
+++ BBQ နဲ့ စားသောက်ဆိုင် +++
" Shwe Li "
Branch (1) - No. 1, ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းထောင့် နှင့် သုခဝတီလမ်း ၊
ဖုန်း - 01578912
Branch (2) - No. 54(A), အင်းစိန်လမ်း ပေါ်တော်မူဘုရားလမ်း ၊
ဖုန်း - 01 535394, 09250208282
" Shwe Pan Sai "
Branch (1) - No. 49, ဆရာစံလမ်း , ဗဟန်းမြို့ နယ်။
ဖုန်း - 01554977, 098592052
Branch (2) - No. 5, ရတနာလမ်း ,ဝေဇယန္တာလမ်း နှင့် သံလမ်း ကြား ၊
ဖုန်း - 09795368466, 09796589088
+++ Street Food BBQ +++
၁၉ လမ်းမှာတော့ ယမကာနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ အကင်များ ရပြီး ကိုယ်ကြိုက်ရာ အကင်များကို စိတ်ကြိုက်မှာစားလို့ ရပါတယ်။
မှတ်ချက် - ဒီ List ထဲမှာ မပါသေးတဲ့ အကင်ဆိုင် ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှိရင်လည်း Comment မှာ ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးလို့ ။
Presented By MyLann Team
‪#‎MyLann ‪#‎Foodiemyanmar ‪#‎Foodinyangon ‪#‎BBQ ‪#‎Yangon ‪#‎Tophot